Igumbi elinokubuka komuntu oyedwa phakathi nendawo - I-Airbnb
Igumbi elinokubuka komuntu oyedwa phakathi nendawo
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Lorraine
Siyindlu yezivakashi elawulwa umndeni etholakala endaweni enamahlamvu yaseFerryhill. Indlu ineminyaka engaphezu kuka-200 ubudala (kodwa ungakhathazeki, ifudumele) futhi yenziwe ngegwala eliqinile eliqoshwe edolobheni lethu elilungile.
Ngenkathi sisendaweni ethule, sitholakala kuphela ukuhamba imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha futhi siseduze kwakho kokubili isitimela neziteshi zamabhasi; kuyindawo ekahle uma ufuna ukushaya idolobha bese ulala ngokuthula ebusuku.
Sinikeza indawo yokupaka kodwa ilinganiselwe kakhulu futhi kufanele ibhukhe ngaphambi kokufika.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi asihlinzeki ngesidlo sasekuseni esiphekiwe kodwa sihlinzeka ngebhulakufesi emakamelweni ngendlela yama-cereal, ijusi, ubisi, ubuhlungu be-au chocolatet, itiye, ikhofi namabhisikidi. Igumbi ngalinye futhi linefriji kanye ne-microwave ukuze ukwazi ukuzigcinela izimpahla zakho futhi ushise noma yini oyidingayo.
Indawo yakithi iluhlaza ngempela futhi iyathandeka. Le ndawo inamapaki amahle aseDuthie anezingadi zasebusika ezidume umhlaba wonke kanye nokufinyelela kalula ezindaweni ezinhle ezigudle uMfula Dee. Ngokuphambene nendlu kukhona iFerryhill House lapho ungathola khona ukudla okuseqophelweni eliphezulu usuku lonke. Futhi sihamba imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka enkabeni yedolobha nasezindaweni zezitolo ezinkulu.
Ngihlala endaweni ehlukile yendlu ngakho-ke ngivame ukuphendula imibuzo futhi ngibhekane nanoma yiziphi izinkinga eziphakamayo.